Lakeland, FL • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Karazana fanorana rehetra: fanorana Nuru, fikosoham-batana, fanorana vatana manontolo.
Lakeland dia tanàna iray any Polk County, Florida, manamorona ny Interstate 4 atsinanan'i Tampa. Ny tanàna farany andrefana amin'ny Polk County, dia ao amin'ny faritry ny Tampa Bay. Raha ny tombana nataon'ny Birao fanisam-bahoaka amerikana tamin'ny taona 2018, dia nisy mponina 110,516 ny tanàna. Karazana fanorana rehetra: Nuru fanorana , Voninkazo, Fanorana vatana manontolo.